Ikhwalithi ephezulu - Izisetshenziswa zeHaiber Play (iShanghai) Co, Ltd.
Uyini umehluko ngekhwalithi yezindawo zokudlala zasendlini?
Njengomkhiqizi wezindawo zokudlala zasendlini ochwepheshe kunazo zonke eChina, sizibophezele ekwakheni nasekwenzeni inkundla yokudlala yasendlini ehlangabezana nezindinganiso zezokuphepha zamazinga onke.
IHaiberi isebenzisa kuphela izinto ezinhle kakhulu futhi ilandela inqubo eqinile yokwakha ukwakha izinkundla zokudlala zasendlini eziphephile, ezihlala isikhathi eside nezenzelwe kahle amakhasimende ayo. Sizibophezele kakhulu ekwenzeni futhi sikhiqize imikhiqizo esezingeni ngoba siyazi ukuthi kubaluleke kangakanani lokhu ebhizinisini lethu lokudlala elingaphakathi lamakhasimende ethu.
Manje kungani ikhwalithi yendawo yokudlala yasendlini ibalulekile?
Kuyavela ukuthi ukuphepha kwezingane kumele kube yinto ebaluleke kakhulu kunoma iyiphi indawo yokudlala, ikakhulukazi enkundleni yezemidlalo yangaphakathi. Ngokukhethekile kwamanye amazwe, izindawo zokudlala zasendlini azikwazi ukuvulwa aze adlule amasheke aqinile okuphepha. Ngakho-ke, ukuba nemishini esezingeni eliphakeme isinyathelo sokuqala sokuqinisekisa ukuphepha kwenkundla yokudlala yangaphakathi.
Ngokuhamba kwesikhathi, ukuba nezindawo ezisezingeni eliphakeme zokudlala zasendlini kuzonciphisa kakhulu izindleko zokugcina futhi kuqinisekiswe inzuzo yesikhathi eside. Ngakolunye uhlangothi, imishini esezingeni eliphansi idinga ukulungiswa njalo, okuguqula ibhizinisi elinenzuzo libe yilahleko. Imikhiqizo esezingeni eliphansi ingadala izinkinga eziningi zokuphepha futhi yenze abathengi balahlekelwe yithemba enkundleni yokudlala futhi bayeke ukuvakasha.
Izindinganiso zokuphepha zaseYurophu naseNyakatho Melika
Ukuphepha komkhiqizo kanye nekhwalithi bekulokhu kuyinto ephambili yeHaiber. Imishini yethu yomdlalo yenziwa ngezinto ezisezingeni eliphakeme kakhulu, kanti nezinkundla zethu zokudlalela ihlolwe futhi zaqinisekiswa ngamazinga aqinile womhlaba wonke (ASTM) kusuka ekuphepheni kwezinto ezibonakalayo kuya ekuphepheni kwesakhiwo sonke.
Ngokuhambisana nalezi zindinganiso, singanciphisa ubungozi bokulimala ezindaweni zokudlala zasendlini futhi siqinisekise ukuthi bayakudlula noma yikuphi ukuhlola kwezokuphepha kuzwelonke, okuphoqelekile noma ngokuzithandela. Kuthatha iminyaka yokuhlangenwe nakho embonini yokuqonda lezi zindinganiso zokuphepha futhi nokutshala izinsiza ezibalulekile nomzamo wokuzisebenzisa futhi uzihlanganise kahle ekwakhiweni nasekwenzeni umsebenzi wokukhiqiza.
Uyini umehluko ngekhwalithi yezinkundla zasendlini?
Ekubukeni kokuqala, izindawo zokudlala zasendlini ezivela kubakhiqizi abahlukahlukene zibukeka zifana, kepha ziyi-patchwork yezicucu, ngenkathi ngaphansi kobuso ikhwalithi yezindawo zokudlala zasendlini ziyahlukahluka ngenxa yezinto ezahlukahlukene, amasu wokukhiqiza, ukunaka imininingwane nokufakwa. Nazi ezinye izibonelo zokuthi kufanele ubheke epaki lekhwalithi.
Izinsiza Zokusebenzisa Iwebhu
Imikhiqizo yokudlala ethambile
Sisebenzisa ubukhulu bensimbi yeshubhu lensimbi engu-2.2mm noma u-2,5mm. Le mininingwane izocaciswa kwinkontileka yokuthengisa futhi izovunyelwa yikhasimende ngemuva kokuthola umkhiqizo wethu.
Ishubhu yethu yensimbi is hot-dip galvanized iron tube. Lapho kwenziwa i-galvanizing, yonke ishubhu yensimbi ifakwa kubhavu lwe-zinc olubunjiwe. Ngakho-ke, ingaphakathi nangaphandle kwepayipi livikelekile kaninginingi futhi ngeke libolile iminyaka eminingi. Ngokuphambene, ezinye izinkampani zisebenzisa izinqubo ezingabizi kakhulu ezifana ne- "electroplating", okungeyona insimbi egqinsiwe ngempela futhi engamelana kakhulu nokugqwala futhi ivame ukubulawa yisikhathi lapho ifika endaweni yokufaka.
Izintambo zethu zokuphatheka zenziwe ngensimbi ebolayo eshisayo edonsa ngamandla enobukhulu obungu-6mm, enamandla futhi ihlala isikhathi eside kunama-clamp ashibhile.
Ikhasimende lingafaka isando ku-clamp ukuze lihlole ikhwalithi yayo. Ungawasho kalula umehluko phakathi kwama-clamp asezingeni eliphansi ngoba azophuka futhi izikejana zethu ngeke zilimale.
Ukwehlukahluka kwama-clamp kusisize ukuklama nokwakha izindawo zokudlala zangaphakathi ezinokwethenjelwa kakhulu nezihlanzekile.
Ipayipi lensimbi emhlabathini lidinga ukusekelwa okuqinile kwe-anchor iron, i-bolt kufanele ilungiswe phansi kokhonkolo, ukuze ishubhu lensimbi ligxilile endaweni efanele.
Abanye abahlinzeki ngepayipi lasekhaya bangavele bahlale phansi, futhi bangafakwa emgodini wepulasitiki, lokhu kungukubuyisela indawo yethu yensimbi esezingeni eliphansi futhi eliphansi, akukho hlelo lokuphepha.
Inetha lethu lokuphepha liyinetha elihlanganiswe ngokuqinile eliqinisekiswe ukusetshenziswa kwangaphandle, elihlala isikhathi eside ukwedlula igridi yabanye abahlinzeki basekhaya.
Eduze kwegagasi lethu le-wave, sizosungula amanetha akhuphukayo ngokuzama ukuvikela izingane ukuthi zingakhuphuki ngesilayidi ophuma kuzo.
Kumakhasimende anezindinganiso zokuphepha, sizofaka i-mesh encane kakhulu ngene elisezingeni eliphakeme eliphikisana nokukhasa ukuvimbela izingane ukuthi zikhuphuke esakhiweni futhi zibe sengozini.
Zonke izingxenye zethu zokhuni zenziwa nge-plywood ephezulu. Uma kuqhathaniswa nabanye abakhiqizi abaningi basekhaya basebenzisa izingodo ezishibhile, lokhu akugcini nje ngokuba sengozini, futhi ngenxa yomonakalo wezinambuzane akulungile ukukusebenzisa isikhathi eside.
Ukusetshenziswa kwezinkuni kunamakhasimende ahlukahlukene anezidingo ezahlukile zombuso noma zezwe, futhi singakwazi ukufeza izidingo zawo, futhi sisebenzise ukuqinisekiswa okujwayelekile kwendawo kweplywood.
Ukugoqwa kwethu kwe-PVC konke kukhiqizwa abakhiqizi abahle kakhulu eChina. La makhilogremu angu-18 wamandla aphezulu wesikhumba se-PVC ubukhulu kungu-0.55 mm, ukuhlanganiswa okungaphakathi ngu-1000 d elukiwe wokwenza i-nylon, kunike amandla ngaphansi, ngemuva kweminyaka yokugqwala kakhulu kuhlale kunekhono lokuthamba.
Sisebenzisa kuphela igwebu eliphakeme kakhulu njenge-liner yayo yonke imikhiqizo ethambile, ngakho-ke imikhiqizo yethu ethambile ingahlala ingaguquki iminyaka eminingi. Futhi sizomboza yonke indawo yokuxhumana ye-plywood ngogwebu ukuqinisekisa ukuphepha kwezingane uma zidlala.
Amapayipi athambile namathayi we-zip
Amapayipi amagwebu okugcotshwa okuthambile ngu-1.85cm futhi ububanzi bepayipi bungu-8.5cm.
Igobolondo le-PVC linombala omsulwa futhi okhanyayo futhi liyamelana nokukhanya kwe-ultraviolet, liqinisekise ukuthi ipayipi lihlala liguquguquka futhi lihlala liqinile ngisho nalapho livezwa ukukhanya kwelanga.
Amapulasitiki enziwe anezinye izinkampani ezifuywayo imvamisa angamasentimitha ayi-1,6 kuphela, futhi ububanzi bepayipi bangamasentimitha ayi-8 kuphela. Igobolondo le-PVC alivumelani nokukhanya kwe-ultraviolet futhi kulula ukudala ukubala kombala. Igobolondo le-PVC nalo liba buthaka ngokuhamba kwesikhathi.
Sisebenzisa ukugoqa okuningi ukulungisa amagwebu kushubhu yensimbi. Ibanga phakathi kwesixhumo sethu esiseduze imvamisa li-15cm kuya ku-16cm, kanti abanye abakhiqizi bavame ukushiya ibanga elingu-25cm liye ku-30cm ukusindisa izindleko zokufaka nezinto zokufaka. Indlela yethu yokufaka izokwenza ukuxhumana phakathi kwewaranti ethambile negridi ibe nesakhiwo futhi icikeke, kunciphisa kakhulu izindleko zokugcinwa kwamakhasimende.
Ukugibela Izitebhisi kanye nezitebhisi
Sine-ungqimba lobukhulu be-fova ye-EVA ephezulu. Lesi singqimba sesipanji sinika amandla izitebhisi nezitebhisi ukuze zikwazi ukumelana nokuxhuma kwezingane futhi zigcine imilo yazo yasekuqaleni isikhathi eside.
Namathisela inetha lokuphepha ngqo ezinhlangothini zombili zesiteythi ukuze uqiniseke ukuthi awukho igebe noma isikhala phakathi kwalezi ezimbili nengane ngeke inyakaze.
Indawo engezansi kwesitebhisi nayo izovalelwa ngenetha lokuphepha ukuze izingane zingaphumi, kepha umnyango uzobekwa eceleni ukuze abasebenzi bangene ekunakekelweni imali.
Izikhwama zethu zesibhakela zigcwele izipanji futhi zigoqwe ngokuqinile esikhunjeni sethu se-PVC esinamandla okuzinikela okuguquguqukayo kanye nokubukeka okuyi -umpump and upscale.
Futhi sisebenzisa izintambo zocingo eziqinile kakhulu futhi eziqinile ukuyixhuma kufreyimu. Isikhwama sokushaya singakwazi ukujikeleza ngokukhululeka ngaphansi kokufakwa kwale ntambo ekhethekile ye-wire.
Ingaphandle lensimbi limbozwe ngesikhumba se-PVC esishuthekwe, esiqinisekisa ukudlalwa okuphephile kwezingane, futhi imininingwane ephakeme yendawo yonke.
Ukuphela komqobo wethu we-X kwenziwa ngezinto ezi-elastic ukwenza ukukhwela kube mnandi futhi kube yinselele. Izinkampani eziningi azisebenzisi izinto eziwugqinsi ekugcineni, okwenza umgoqo ube lukhuni ube buthuntu. Zonke izithiyo zethu zokugcina ihlathi zigcwele ngobuningi obukhulu bekotini lokwenziwa, elifana ne-padding esetshenziselwa amathoyizi e-plush, ahlala isikhathi eside isikhathi eside. Ngokuphambene, abanye abakhiqizi abaningi bavame ukugcwalisa imikhiqizo yabo ngemikhiqizo ehlukahlukene yedoti.
Ubukhulu nekhwalithi ye-EVA floor mat nayo idlala indima ebaluleke kakhulu epharadesi lezingane zasendlini, umugqa omuhle waphansi ongaphezulu kokwenza ukuthungwa okungcono, imvamisa nokuqina kokugqoka kungcono, i-mat floor yaphansi ingakwenza ungadingi ukuthi uvame ukufaka indawo phansi phansi mat.
Inqubo yokufaka iyingxenye ebalulekile yokwakha inkundla yokudlala yasendlini. Izinga lokufaka lizothinta umphumela ophelile wenkundla yokudlala yangaphakathi. Yingakho inkundla yokudlala yangaphakathi ithathwa njengephelele kuphela uma ifakiwe ngokuphelele futhi ihlolwe nokuphepha. Uma inkundla yokudlala ingafakiwe kahle, ukuphepha nekhwalithi yendawo yokudlala engaphakathi kuzothinteka kakhulu kungakhathalekile ikhwalithi yemishini.
IHaibei inethimba lokufaka lomsebenzi elinolwazi nelinekhono. Ochwepheshe bethu bokufaka banesilinganiso seminyaka engu-8 yolwazi lokufaka indawo yokudlala. Bafake izinkundla zokudlala zasendlini ezingaphezu kwekhulu emhlabeni jikelele, futhi balandela imigomo eqinile yokuqinisekisa ukuthi ifakwe kahle, hhayi nje ephephile futhi ihlala isikhathi eside, kodwa futhi inikeze ipaki ukubukeka okuseqophelweni eliphezulu futhi kulula ukuyigcina. Ithimba lethu lokufaka lochwepheshe liyisisekelo sokuqinisekiswa kwekhwalithi yokufakwa kwethu. Ngokuphikisana nalokhu, abanye abaphakeli abaningi abanabo abafakeli babo, kepha banciphisa umsebenzi wokufaka kwabanye, ngakho-ke abanakulawula ikhwalithi yomsebenzi wokufaka.